MODA | Article Detail | MEGAN FOX ရဲ့တတိယမြောက်ရင်သွေးလေးက ယောက်ျားလေးပါပဲတဲ့ . . .
MEGAN FOX ရဲ့တတိယမြောက်ရင်သွေးလေးက ယောက်ျားလေးပါပဲတဲ့ . . .
သားလေးနာမည်ကို Journey River Green လို ့ပေးလိုက်တဲ့ Megan Fox!
မင်းသမီး Megan Fox ဟာ တတိယမြောက်ရင်သွေးလေးဖြစ်တဲ့ Journey River Green ကို အောင်အောင်မြင်မြင် မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးက အစောပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေကို သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းကို အသိမပေးထားသေးဘဲ ၂၀၁၆ Cinema Con ကို အနက်ရောင်ဗိုက်ဖုံးအင်္ကျီအကျပ်ကို ဝတ်ဆင်လာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို surprise လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ Megan ဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။Megan နဲ့ Brian တို့ဟာ ယခင်နှစ်ထဲကကွာရှင်းပြတ်စဲဖို့ကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ တတိယမြောက် ရင်သွေးလေး ထပ်တိုးလာတာကြောင့်လည်း Megan နဲ့ သူမခင်ပွန်းတို့ဟာ ကွာရှင်းပြတ်စဲဖို့ စီစဉ်ထားတာကို ရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ Brian နဲ့ Megan တို့ဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီး တစ်ယောက်အကြောင်းလည်း တစ်ယောက် အရမ်းကို သိရှိကြပါတယ်။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်လည်း လေးစားကြပါတယ်။ တတိယရင်သွေးလေးအတွက်ကြောင့် ကွာရှင်းမှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် လို့အတွင်းသိတစ်ယောက်က ပြောပြထားပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ကလေး၃ယောက်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Megan က သူမကလေးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကလေးတွေကို တီဗီတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကို သိပ်ပြီးကြည့်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှင့်။ အိုင်ပတ်တွေ၊ အိုင်ဖုန်းတွေလည်း အရမ်းသုံးခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေက ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါ လို့ပြောပြထားပါတယ်။ အသက်၃၀ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brian Austin Greenတို့ဟာ ၃နှစ်အရွယ် Noah နဲ့ ၂နှစ်အရွယ်လို့ခေါ်တဲ့ ချစ်စရာသားလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
Ref: E! News